ရွှေပြည်သာ အရက်ချက်စက်ရုံ မီးလောင်မှုအကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
วันพฤหัสบดี ที่2ก.ค. 2563
ရွှေပြည်သာ အရက်ချက်စက်ရုံ မီးလောင်မှုအကြောင်းအပါအဝ...
27 พ.ค. 2563 - 11:12 น.
(၁) ရွှေပြည်သာ အရက်ချက်စက်ရုံ မီးလောင်မှု အကြောင်းရင်း မသိရသေး
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ PMG အရက်ချက်စက်ရုံမှာ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁ နာရီလောက်ကြာ မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို မေးရာမှာတော့ မီးလောင်မှုဟာ အရက်ချက်စက်ရုံက စက္ကူကဒ်ဖာတွေထားတဲ့ ပေ ၅၀ ၁၅၀ အကျယ် ဂိုထောင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့ ၃၂ သိန်းရှိပြီး မီးလောင်မှုအတွင်း ဂိုထောင်ထဲက စက္ကူကဒ်ဖာဗူး ၁ ထောင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ခေါင်းခန်းလည်း လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ မီးသတ်ဦးစီးဌာန အရာရှိတစ်ဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မီးစတင်လောင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း အသေးစိတ်ကိုတော့ စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း မီးသတ်ဦးစီးဌာန အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မီးလောင်မှုဟာ မနက် ၁ နာရီလောက်မှာ စခဲ့ပြီး ၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ မှာ ငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မီးလောင်မှုကို level3သတ်မှတ်ခဲ့ရပြီး မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ယာဉ်တွေ လာရောက်ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဖော်ပြပါတယ်။
(၂) နှိပ်စက်ခံရတဲ့ လူမည်းအမျိုးသား သေဆုံးမှုကြောင့် ရဲ ၄ ဦးကို တာဝန်တွေက ရပ်စဲ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မီနီဆိုးတားပြည်နယ်မှာ လက်နက်မဲ့ လူမည်းအမျိုးသား တစ်ဦးကို လူမြင်ကွင်းရှေ့ နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် ရဲအရာရှိ ၄ ဦးကို တာဝန်တွေကနေ ရပ်စဲလိုက်ပြီ လို့ မီနီဆိုးတားရဲဌာနက ရဲအရာရှိချုပ် က Medaria Arradondo ပြောလိုက်ပါတယ်။
လူမည်းအမျိုးသားရဲ့ လည်ပင်းကို လူဖြူ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဒူးခေါင်းနဲ့ တက်ကြိတ်ပြီး မေးမြန်းနေတဲ့ ရုပ်သံဗွီဒီယို ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ခုလို အရေးယူလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဗွီဒီယိုထဲမှာတော့ လူမည်းအမျိုးသားက အသက်ရှုကြပ်နေပြီ၊ အသက်မရှုနိုင်တော့ဘူး လို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြောနေတာကို ရဲအရာရှိက လျစ်လျူရှုပြီး ဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် George Floyd ဆိုသူ အမျိုးသားဟာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပြီး ရဲတွေဘက်ကတော့ အဲ့ဒီလူကို လိမ်လည်မှုတစ်ခုအတွက် စစ်ဆေးမေးမြန်းစဉ် ပြန်လည်ခုခံခဲ့တယ်လို့ အစောပိုင်းတုန်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗွီဒီယိုထဲမှာတော့ စစ်ဆေးနေစဉ်မှာ အဲ့ဒီလူကို နောက်ပြန် လက်ထိပ်ခတ်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) IMF ကနေ ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ ချေးဖို့ လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်
NLD ပါတီက အမတ် အများစု ရှိတဲ့ လွှတ်တော်မြင်ကွင်း
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် လိုအပ်လာနိုင်တဲ့ ဘတ်ဂျက်လိုငွေကို ကာမိစေဖို့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကနေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ (ကျပ်ငွေ ၁၀၀၀ ဘီလီယံ ခန့်) ကို ချေးငွေအဖြစ်ယူဖို့ မေလ ၂၆ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးက အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
"ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ဟာ သာမန်နှစ်တွေကထက် ပိုပြီး လိုငွေပြမယ့်နှစ်ဖြစ်ပြီး မြင့်တက်လာမယ့် ဘတ်ဂျက်လိုငွေကို ဖြည့်ဆည်းရာမှာ အသုံးပြုမယ်" လို့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက လွှတ်တော်မှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ လျာထားချက်က ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၆ ရာကျော် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် မူလခန့်မှန်းထားတဲ့ လိုငွေအပြင် မူလ လျာထားချက်မှာ မပါဝင်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ သုံးစွဲလာရပြီး စီးပွားရေး နလန်ထူဖို့ လိုအပ်တဲ့ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်တွေ၊ ရငွေ လျော့နည်းနိုင်တဲ့ အလားအလာတွေကြောင့် လိုငွေမြင့်တက်နိုင်တာဆိုတာကို ခန့်မှန်းထားပါတယ်" လို့ ဒုဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက လွှတ်တော်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
IMF ချေးငွေဟာ အတိုးနှုန်းသက်သာပြီး ချေးငွေ သက်တမ်းလည်း ရှည်ကြာတယ် လို့လည်း ဒုဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
(၄) ကိုဗစ်-၁၉ ထပ်တိုးလူနာ ၃ ဦးက အိန္ဒိယပြန်တွေဖြစ်၊ ပိုးကူးစက်သူ ၂၀၆ ဦးရှိလာ
ကိုဗစ်-၁၉ ထပ်တိုးလူနာ ၃ ဦးဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပြန်လာသူတွေ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းကပိုးကူးစက်ထားသူတွေနဲ့ ထိတွေ့ထားမှု ရာဇဝင် မရှိဘူးလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက မေလ ၂၆ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
လူနာသစ် ၃ ဦးဟာ မန္တလေးတိုင်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၃၉ နှစ်နဲ့ ၆၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား ၂ ဦးနဲ့ အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး ၁ ဦးတို့ဖြစ်ပြီး သူတို့တွေကို ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ အသွားအလာစောင့်ကြည့် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ ဒီကနေ့ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်တော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်တဲ့ ထပ်တိုးလူနာသစ် မရှိဘူးလို့ ဖော်ပြပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ ၂၀၆ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကင်းစင်သူကတော့ စုစုပေါင်း ၁၂၄ ဦးရှိပြီး အဲ့ဒီထဲက ဆေးရုံဆေးခွင့်ပြုသူကတော့ ၁၁၄ ဦး ရှိတယ်လို့လည်း ကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
นางแบบสาว แฉช่างภาพหื่น ล็อกห้องน้ำบังคับอมนกเขา อ้างอดใจไม่ไหว
คนเก็บขยะขาย ถูกหวย 12 ล้านบาท เผยความฝันพาดวงเฮง
พ่อช็อก ลูก13ท้องโต ยายคิดว่าเนื้องอก บีบน้ำนมไหล คลอดก่อนกำหนด จี้โทษหนักตาเลี้ยง
เฟี้ยว์ฟ้าว รำบวงสรวง แม่ย่าธานี เลื้อยผ่านพิธี ตัวม่วงดำ-เศียรสีทอง พ่อปู่ก็มา(คลิป)
ด่วน! ไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญกลางดึก เพลิงลุกลามหนัก จนท.ระดมฉีดน้ำ
จตุรงค์ เดือดหนัก หลังฟัง นิกกี้ ให้สัมภาษณ์ โน้ต ถึงกับลั่นเป็นเรื่องแล้วมึง
ราชกิจจาฯ เผยระเบียบขนส่ง เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงโควิด ไม่ต้องสอบ
เฟี้ยวฟ้าว ไลฟ์โชว์ความขลังถูกหวยอีกแล้ว เชื่อผลสร้างถ้ำแม่ย่าธานี
วอดหลายแผง! ไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ ร้านทองโดนหนักสุด เร่งหาต้นเพลิง
แบงก์ชาติ ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์เพิ่มเติม ตามมติครม.
อัลบั้มภาพ ရွှေပြည်သာ အရက်ချက်စက်ရုံ မီးလောင်မှုအကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ